(L) PET Scan သည် Dopamine အဆင့်နိမ့်ခြင်းနှင့် Aggression ကိုဆက်သွယ်ခြင်း (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်တွင် Porn On
(L) ပေစကင် Link ကိုအနိမျ့ Dopamine အဆင့်နှင့်မှထုတ်ပြန်သော (2012)
By က Marijke Vroomen Durning, RN | ဇွန်လ 12, 2012
ပေပုံရိပ်အနိမ့်အကြားတစ်ဦး link ကိုသရုပ်ပြထားပါတယ် dopamine ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့လူကြီးတွေမှာအဆင့်ဆင့်နှင့်ကျူးကျော် - ယခင်ကတွေးဆခဲ့ရာကနေအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်တွေကိုသုတေသီများကဈကပြောပါတယ်မိုင်ယာမီကမ်းခြေ, Fla အတွက်နျူကလီးယားဆေးပညာရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတင်ဆက်မှု, na ။ , ယခုအပတ်။
ကျူးကျော်များ၏ neurobiology ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်သုတေသီများ serotonin, တစ်ဦး neurotransmitter နှင့်အချို့သောရန်လိုအပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိကွောငျးသတိထားမိခဲ့ကြပြီ။ ဒီထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, Aachen, ဂျာမနီအတွက် RWTH Aachen University မှသုတေသီတွေက, အမှတ်အနုတ်ကျူးကျော်ပါရာဒိုင်း (PSAP) အဖြစ်လူသိများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတာဝန် အသုံးပြု. ကျူးကျော်ဘို့မိမိတို့ 18s အတွက် 20 hea lthy လူကြီးများအကဲဖြတ်။ သူတို့ကအပျော်အပါးများနှင့်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် dopamine ၏အဆင့်မြင့်, မှထုတ်ပြန်သောတိုးလာလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုခဲ့ပေမယ့်ဆိုခဲ့အဖြစ်ရလဒ်ကြဘူး။
(နောက်ထပ်: ပေ Tracer Active ကိုဦးနှောက်နည်း Beta ကို-Amyloid ဖူးဖော်ပြပေး)
သင်တန်းသားများကိုအခြားအခန်းတွင်တစ်ဦးပြိုင်ဘက်သင်တန်းသားများကို '' အနိုင်ရရှိတဲ့အချို့ခိုးခိုးယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကပြောကြားခဲ့ကြသည်ထားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်, ထိုဘာသာရပ်များ (သူကိုအဖြစ်မှန်အတွက်မတည်ရှိခဲ့ပါဘူး) ကို cheater ကိုအပြစ်ပေးနိုင်ကြောင်း, ထိုဆန့်ကျင်ဒိုင်းလွှားကို ထပ်တလဲလဲကာကွယ်ရေး button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရန်ဘက်ပြုသောသူ, ဒါမှမဟုတ်ငွေသားအနိုင်ရသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဂိမ်းကစားရန်ဆက်လက်။ ဤသည်ခံနိုင်ရည်ညွှန်ပြ။
အဆိုပါဘာသာရပ်များက F-18 FDOPA, serotonin synthesize မှအင်ဇိုင်းတွေ '' စွမ်းရည်တက်ထွန်းတဲ့ biomarker နှင့်အတူပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ခံယူ။ thအီးလွှာမှအဆိုပါဘာသာရပ်များ '' dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်များနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုဆိုင်သောနေရာများတွင်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသီများ dopamine ပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်အခြားအလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြား, အလှုံ့ဆျောမှုစင်တာတို့ပါဝင်သည်သော Basal ganglia ၌ပစ္စုပ္ပန်ရှိရာဦးနှောက်ထဲမှာဒေသများရှိရန်လိုတုန့်ပြန်ပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ minimized ကျူးကျော်သည့် midbrain နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍသော striatum နှင့်စုံစမ်းလုပ်ငန်းဆောင်တာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပိုမိုမြင့်မား dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်.
Focအနိမ့်စွမ်းရည်ရှိသူဖြစ်စေမှထုတ်ပြန်သောကာကွယ်ရေး, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ပိုမိုမြင့်မားအားနည်းချက်ခဲ့သုတေသီများကဆိုသည်စဉ်ကို PSAP ၏ငွေကြေးဆုလာဘ်ရှုထောင့်အပေါ်, dopamine ပေါင်းစပ်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းရည်နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားတွင်ထင်ရှားလေ၏.
"ကျနော်တို့ကတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ဆုလာဘ်စနစ်အဒေါသသည်ဆန့်ကျင်ပိုပြီးခံနိုင်ရည်ဖြစ်စေသောထင်ပါတယ်" ဟုဦးဆောင်ရေးသားသူ INGO Vernaleken, MD ကဆိုသည်။ "သို့သော်ကျနော်တို့ဘာသာရပ်တိုက်ရိုက်အခြားနည်းလမ်း၏မရှိခြင်းအတွက်, ရန်လိုသည့်အပြုအမူကနေအကျိုးမပေးနိုင်မယ်လို့ဘယ်မှာအခြေအနေမျိုး၌, ဆက်စပ်မှုတဝိုက်အခြားလမ်းဖြစ်မည်အကြောင်းဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။ "